Ubuzwe be-Antigua neBarbuda beNonsuch Bay Abelana
Isabelo sehhotela esithengiselwa i-Antigua neBarbuda Citizenship
INonsuch Bay Resort
Enye yezindawo zokungcebeleka zikanokusho nezanamuhla zaseCaribbean ezisogwini olufihlekile nolungonakalisiwe lwaseNonsuch Bay, e-Antigua. Indawo yokungcebeleka ilungele imibhangqwana kanye nemindeni futhi iyindawo ekahle noma ngabe ufuna ukuzipholela noma ukuphumula noma ukujabulela iholide elijabulisayo.
INonsuch Bay Resort ikunikeza ithuba lokubekisa elinye lamasudi ethu omndeni aziphekelayo noma ungene kwelinye lamafulethi omndeni wethu e-The Escape. INonsuch Bay Resort yakhiwe ngamasudi amane avulekile, aqokiwe kahle kanye namakotishi asebhishi anamabhalkhoni amakhulu anemithunzi anikezela ngemibono emihle yolwandle olushisayo nolwandle oluhle oluluhlaza. Indawo yokungcebeleka inebhishi elizimele kanye namabhishi ayisihlanu angenalutho e-Green Island eseduze, okuwukuhamba ngesikebhe okufushane ukusuka ogwini.
Izivakashi zingahamba nge-kayaking kanye ne-snorkelling. Bhuka iNonsuch Bay Antigua namuhla bese uya kwenye yezindawo zokungcebeleka ezinhle kakhulu zaseCaribbean zemibhangqwana nemindeni.